Safiirka Somalia ee Kenya oo booqdey maxaabiis Somali ah ku xiran Mombasa – SBC
Safiirka Somalia ee Kenya oo booqdey maxaabiis Somali ah ku xiran Mombasa
Posted by editor on Janaayo 12, 2013 Comments
Danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka kenya Maxamed Cali America ayaa shalay oo jimco ahayd booqasho ku tagay Xabsi ku yaala Magaalada Mombasa ee dalka Kenya halkaas oo ay ku xiran yihiin dhalinyaro fara badan oo soomaali ah oo isugu jira kuwa burcad badeed ahaan loo soo qabtgay iyo kuwa laga soo raafay Magalooyinka Kenya oo markii dambe maxkamad xukuntay
Danjire America oo indhihiisa ku soo arkay dhalinyaradaas dhibaataysan ayaa qaarkood indhaha biya ka sii daayay markii ay arkeen mas’uul soomaaliyed oo u taagan sii deyntooda.
Waxaa uu sheegay Danjire Maxamed Cali America in dowladda kenya kala hadlay xaalada dadka ku xiran xabsiyada isla markaana ka codsaday in lagu soo wareejiyo maxaabiistaas Dowladda Soomaaliya.
Safaaradda Soomaaliya ee dalka kenya xad iyo jeer waxay u taagan tahay wax u qabashada dadkeeda sidaas waxaa yiri Danjire Maxamed Cali America.
Isagoo ka hadlayay wixii uu ku soo arkay xabsigaas waxaa uu yiri waxaan arkay wiil soomaaliyed oo lugta ka go’an waxaan u ballan qaaday inaan u soo iibin doono lug,waa sii hadlay Danjire America waxaa uu yiri markii ay i arkeen wiilasha aad ayay u faraxeen waxaan la tukaday salaadii duhur ee maanta.
Booqashadan ayaa aheyd mid uu ugu kuur galayay Safiirku xaalada ilaa boqol dhalinyaro Soomaali oo ku xiran Xabsiga Mombasa, kuwaasoo ku xukuman sanado xabsi ah, markii maxkamad ku taala dalka kenya la soo taagay.
Safiir Ameeriko ayaa mid mid u kormeeray goobaha ay seexdaan, xaalada caafimaadkooda iyo raashinka ay cunaan, isagoo Safiirku cadeeyay inay ka taxadari doonaan sidii ay xaaladooda mar walba ula socon lahaayeen.